5 Nyore Nzira dzekuvandudza yako Saiti Kuverengeka | Martech Zone
5 Nyore Nzira dzekuvandudza yako Saiti kuverenga
China, July 17, 2008 Chishanu, May 3, 2013 Douglas Karr
Vanhu vazhinji havadaro verenga mawebhusaiti mune akajairwa pfungwa. Vanhu vanoongorora zvinyorwa kubva kumusoro kusvika pasi uye vanobata misoro, mabara, mifananidzo, mazwi akakosha uye zvirevo zvavari kutarisira. Kana iwe uchida kuvandudza mashandisiro anoita vaverengi zvemukati zvako, pane nzira dzekukwirisa marongero ako.
Isa rima mavara pane chena kumashure. Mimwe mivara yakapfava yekumashure inogona kushanda, asi kupesana kwakakosha, nefonti iri kusviba kupfuura kumashure.
Edza kukura, mavara akanyorwa zvakanaka. Ini ndinoda 'Lucida Grande' nekuti ine serifs. Pane humbowo hwekuti vanhu vanoverenga neshoko chimiro, kwete netsamba, uye kuti serifs inovandudza kugona kwekuwedzera kwekunzwisisa.
Edza kuwedzera yako-kukwirira-tambo uchishandisa CSS kupa yakaringana nzvimbo yekuti vaverengi vateedzere tambo yemavara pasina netsaona kusvetuka kumusoro kana kudzika tambo.
Kugovanisa whitespace yako zvine musoro. Iyo nzvimbo mune yega yega barbar inofanira kunge yakaenzana kubva pane zvako zvemukati. Iyo nzvimbo pakati pezvinyorwa inofanira kuve inopfuura iyo nzvimbo pakati pemusoro nepositi yacho ndeyayo. Iwo mafonti ezvako zvemukati anofanirwa kuve akakura pane mafonti eblog rako ezvimwe zvakasarudzika maficha. Whitespace ndiyo kiyi kune yakanaka saiti ine kuverenga kukuru.
Shandisa misoro, oneka, akatsveyamiswa uye zvinyorwa zvine mabara zvakanaka. Chinyorwa chine zvakanyanyisa kushandiswa chinyorwa chakanyatsobvisa pachiitiko uye chinoderedza kukosha kwemitsara yakashinga. Ipa vashandisi nematurusi ebhizimusi kuti vagadzirise ruzivo rwavo rwekuverenga. Mabulleted zvinyorwa zvinopa zvirimo zviri nyore kuverenga. Chinyorwa chakadai seichi chinopa kuongororwa kwepfungwa kune muverengi.
Kiyi yekuchengetedza kwakanaka uye kukura kuverenga ndeyekugona kwevaverengi vako kuchengetedza zvemukati zvavakawana pane yako saiti. Kurongeka kwako, kushandiswa kwechena, uye kushandisa kwakakodzera maturusi ekunyora zvinhu zvakakosha zvinhu zvausingafanire kukanganwa.
Maitiro ekuenda kumusangano weBlogging ye $ 2,000 ye $ 49
Kugadziriswa kubva kuComcast's Blacklist